usjava uyesaba ukuphumela obala ngekusasa - Ilanga News
Home Izindaba usjava uyesaba ukuphumela obala ngekusasa
usjava uyesaba ukuphumela obala ngekusasa
UYESABA ukuphumela obala ngekusasa lakhe enkampanini aqopha ngaphansi kwayo, uSjava osematheni kulezi zinsuku ngokuvulelwa icala lokudlwengula
ngobeyintombi yakhe, uLady Zamar.
UJabulani Radebe owaziwa kakhulu ngoSjava, uthi kayikho into azoyikhuluma okwamanje ngenkontileka yakhe ne-Ambitious, kodwa uzokhuluma kahle uma sekukhona okukhulumekayo.
Ubephawula kuleli phephandaba ngemuva kokuqubuka kwamahlebezi okuthi leli ciko elingaconsi kubalandeli balo, lihlaselwa yizinkinga nje, yingoba selizama ukuzicabela indlela ephumayo kule nkampani.
Ngokusho kwemithombo eyahlukene, uSjava kakusasele nsuku zatshwala aphume kule nkampani ayozimela.
“USjava usenayo inkontileka nenkampani iSony, okuyiyona esizongamela umsebenzi wakhe. Lokho kumdalele amazinyo abushelelezi kumphathi wakhe uKgosi, kwazise ubengazimisele ngokumdedela. Kuyimanje isimo kasisihle phakathi kwabo bobabili,” kusho umthombo. Ethintwa uSjava ngalolu daba, akaphikanga futhi akavumanga. Uthe ngeke akhulume ngalo.
“Kangikwazi mina ukukhuluma uma izinto zinje. Ngiyathula nje ngithandazele ukuba zilunge. Uma sekukhona okukhulumekayo, ngizokwazi ukukhuluma, kodwa okwamanje ngicela ukungasho lutho,” kusho yena. Utshele leli phephandaba ukuthi umcimbi wakhe i-one man show usazohambela nezinye izifundazwe.
UMnu Kgosi Mahumapelo ongumphathi kaSjava ethintwa ngalolu daba, uthe kuyinhlamba lokhu abakusho kuyena ukuthi ubulala uSjava ngoba nakhu esehamba enkampanini yakhe. Uthe akayazi eyokuhamba kukaSjava njengoba besasebenzisana. Uthe: “Ngisebenzise imali engu-R1,4 million emcimbini kaSjava obuse-Thekwini. Uma ngise kahle ekhanda
ngingakhipha imali engaka bese mina futhi ngicekela phansi igama lalowo muntu esengikhokhe imali engaka kuyena? Ngabe ngiyaphila ekhanda?”
Uthe ukusebenzisana phakathi kwabo kusazodonsa, kakuyona into ezophela manje. “USjava unenkontileka yeminyaka ewu-5 nale nkampani. Kule nkontileka kumele akhiphe ama-album amathathu. Usakhiphe amabili kuphela. I-album iyinye siyisebenza izinyanga eziwu-18. Lena nje yesibili (Umqhele) kayikakazihlanganisi lezo zinyanga.
“Ngakho-ke uSjava akayi ndawo. Sisazosebenza naye futhi kasinazo izinkinga naye. Ngabantu nje esibona bebhala ukuthi unenkinga nenkampani, kodwa thina kasiyazi leyo nto ngoba naye akakaze asibikele. Empeleni nale nkontileka okuthiwa unayo nenye inkampani, kasiyazi,” kusho uKgosi.
Uphinde watshela leli phephandaba ukuthi umcimbi kaSjava i-One man show usazoqhubeka uhambele izifundazwe ongakaze uyiswe kuzona. “Singawenza kanjani umcimbi kaSjava singasasebenzisani naye? I-One man show kakusiyona ekaSjava, ngeye-Ambitious, ukuba kasisasebenzi naye ngabe kasinazo izinhlelo zokuqhubeka nayo,” chaza.
Khonamanjalo, uSjava uthi le show akayiboni iya ngakubo eBergville ngoba indawo enkulu kabanayo, izohambela izindawo ezimumatha abantu abaningi.
Previous articleIsilomo sowokholo sigonyuluka ngokudakwa
Next articleIChiefs ihlela ukuvuka ngeWits